स्वास्थ्य पेजरक्त समूह अनुसार कस्तो खानपान उपयुक्त ? - स्वास्थ्य पेज रक्त समूह अनुसार कस्तो खानपान उपयुक्त ? - स्वास्थ्य पेज
रक्त समूह ‘ए’ भएको व्यक्तिले मांसाहारी भन्दा शाहाकारी भोजन लिनु उत्तम हुन्छ । यो समुह भएको व्यक्तिको प्रतिरक्षा प्रणाली संवेदनशिल हुन्छ । यो समुह भएको ब्यक्तिले लागि हरियो सब्जी, अन्न, अंकुराएको गेडागुडी, फल ड्राई फ्रुट्स, ब्रेड, नुडल्स, चाइनिज फुड, डिनर रोल, बर्गर जस्ता खानेकुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तौल घटाउनको लागि मासु, दुधबाट बनेको परिकार, गहुँ प्रतिबन्धित गर्नुपर्छ ।